>၂။ အကြင်နာတရား – The Only Way To Go!
Posted on November 4, 2009 by barnay
>ငါသည် ကြင်နာတတ်ရမည် . ငါသည် မြတ်နိုးတတ်ရမည် . ငါသည် တန်ဖိုးထားတတ်ရမည် .ငါသည် သနားတတ်ရမည် . ငါသည် ပံ့ပိုးနိုင်ရမည်. ငါသည် . ငါသည်…………..စသည်ဖြင့် . အကြောင်းတစ်ရား မြောက်များစွာကို အခြခံရင်း .အကြင်နာတရားနှင့်ယှဉ်ပြီးဖြစ်ပေါ်၏…..အကြင်နာဆိုသောအရာမှာ လူတိုင်းနားလည်နိုင်သော အရာပါ . သို့ပေမဲ့ စကားလုံးသာသိပြီး သူ့ရဲ့ အနှစ် သူ့ရဲ့ လေးနက်မှုကို သိသူ နည်းပါတယ် . အကြင်နာတရားမှာ နူးညံ့သော နှလုံးသားမှ ဖြာထွက်လာသော ရောင်ခြည်လေးပင်ဖြစ်ပါတယ်
လူဆိုတဲ့ အမည်လေးမှာ မြောက်များလှစွာသော အကြောင်းအရာတွေ ရှိ၏ တစ်ချို့ ကားတိမ်၏ တစ်ချို့ကား နက်၏ တစ်ချို့ကား ကျယ်ပြော၏ တစ်ချို့ ကား ကျဉ်းမြောင်း၏ .. တစ်ချို့တစ်ချို့တွေသည်လက်ခံမှုအပေါ်မှာ မူတည်၍ ကွဲပြားစွာ ရှိ၏… ထို့အတူ အကြင်နာတစ်ရားသည်လည်း တစွန်းတစ်ပါဒ တွဲလျက်ပါရှိ၏ . သူ့ကို ကြီးထွားအောင်လုပ်ယူ၍ ရ၏ . လူ့စိတ်ကြောင့် သေးငယ်သွားနိုင်၏ ဘာပဲ ဖြစ်ဖြစ် သူ့ကို တော့ ထားရှိသင့်၏ . အကြင်နာ၏ သဘောကား ကူးစက်လွယ်၏ လူမဆိုထားနှင့် တိရစ္ဆာန်လေးတွေတောင် နားလည်၏ . သက်ရှိများအပါအ၀င်ဖြစ်၏. ကျနော်သည်လည်း ထို့အတူဖြစ်၏ .အကြင်နာတရားကို စစ်မစစ် နှလုံးသားမှ ပဲတင်ခံစားမှုရှိ၏ … လောကကြီးမှာ မျက်နှာဖုံးများနှင့်လူရှိ၏ .. ကြောင်သူတော် ကြွက်သူခိုးကဲ့သို့လည်း ရှိ၏ .ဥာဏ်ရှိသောလူ ပညာရှိသောလူသည် သိ၏ .. သို့ပေမဲ့ အကြင်နာတရားတိုင်း လေးစားဖွယ် မြတ်နိုးဖွယ်ကောင်း၏ . အကြင်နာတရားမှာ လွတ်လပ်၏ .နှစ်လိုဖွယ်ဖြစ်၏ .ချစ်ခင်စရာကောင်း၏ . လေးစားဖွယ်ဖြစ်၏ . တန်ဖိုးထားရမြည့် အရာဖြစ်၏ .. လူသားအားလုံး မှာ အပြည့်အ၀ရှိလျှင် အတိုင်း ထက်အလွန်ဝမ်းသာမိ၏ . သို့ပေမဲ့ ထင်သလိုသာဖြစ်ရင် . လောကကြီးက အရသာပြည့်စုံမယ် မထင် … သိုပါသောကြောင့် အကြင်နာတရား၏ ကောင်းကျိုးများကို နားလည်စွာနှင့် ဝေငှစေချင်နေမိ . ထိုအရာတွေသည်ကား အကြင်နာတရား၏ တစ်စွန်းတစ်ပါဒ မြင်ကွင်းဖြစ်၏…. .
Posted in UncategorizedTagged အကြင်နာ
>၁။ မေတ္တာ တရား